WKG waxay aaminsan tahay, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Marka loo eego marag u noqoshada Qorniinka, Ilaah waa ilaah rabaani ah oo leh saddex weligiis waara, isku mid ah laakiin dad kaladuwan, Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Isagu waa Ilaaha keliya ee runta ah, weligiis waara, oo aan la beddeli karin, wax walba awood u lahayn, wax walba yaqaan, oo meel walba jooga. Isaga waa Abuuraha cirka iyo dhulka, dayactirka caalamka iyo isha badbaadada dadka. In kasta oo transcired, Ilaah wuxuu si toos ah iyo shaqsi ahaaneed ku sameeyaa dadka. Ilaah waa jacayl iyo wanaag aan dhammaanayn ...
Ilaaha ah Aabbaha, waa qofka ugu horreeya Eebbe, oo aan asal ahaan ahayn, kaas oo Wiilku ka dhashay qarniyadii hore oo kan Ruuxa Quduuska ahu weligiis ku sii socdo Wiilka. Aabaha, oo abuuray wax kasta oo la arki karo oo aan la arki karin oo ku saabsan Wiilka, ayaa soo diraya Wiilka si aan u gaarno badbaadada oo u siiso Ruuxa Quduuska ah cusboonaysiinta iyo aqbalitaanka innagoo ah carruurta Ilaah. (Yooxanaa 1,1.14, 18; Rooma 15,6; Kolosay 1,15-16; Yooxanaa 3,16; 14,26; 15,26; Rooma ...
Ilaah, Wiilku, waa qofka labaad ee ilaahnimada, oo uu abuuray aabuhu da’ado ka hor. Isagu waa erayga iyo u ekaanta Aabbaha xagga isaga, oo wax walbana isagaa uumay isaga. Waxaa laga soo diray Aabaha sidii Ciise Masiix, Eebbe, oo loogu muujiyey jidhka inuu awood inoo siiyo badbaadada. Waxaa helay Ruuxa Quduuska ah oo ku dhashay Maryantii bikradda ahayd, isagu wuxuu ahaa Ilaah oo dhan iyo nin oo dhan, waxay ku midoobeen laba dabeecadood oo hal qof ah. Isaga, wiilka ...
Ruuxa Qudduuska ahi waa qofka saddexaad ee ilaahanimada weligiisna wuxuu ka yimaadaa xagga Aabbaha xagga Wiilka. Isagu waa gargaaruhu wuxuu ballanqaaday Ciise Masiix inuu Ilaahay u soo diray dhammaan rumaystayaasha. Ruuxa Quduuska ahi wuu inagu dhexjiraa, wuxuu inagu mideeya aabaha iyo wiilka, oo wuxuu na beddelaa tawbadkeen iyo isdaahirinta, iyo cusboonaysiinta joogtada ah, wuxuu inagu raaciyaa muuqaalka masiixa. Ruuxa Quduuska ahi waa isha laga helo dhiirrigelinta iyo sheegidda ee Kitaabka Quduuska ah waana isha midnimada iyo ...
Boqortooyada Ilaah, sida ugu weyn, waa xukunka Ilaah. Boqortooyada Eebbe waxay horeyba uga muuqatay kaniisadda iyo nolosha rumaystaha kasta oo isaga u gudbiya doonistiisa. Boqortooyada Ilaah waxay si buuxda u dhisnaan doontaa sidii nidaam adduunyo ka dib soo laabashadii Masiixa markii wax walba laga hoggaansan doono. (Sabuurradii 2,6-9; 93,1-2; Luukos 17,20-21; Daanyeel 2,44; Mark 1,14-15; 1 Korintos 15,24-28; Muujintii 11,15; 21.3.22) -27; 22,1-5) Waqtigan xaadirka ah iyo kan mustaqbalka ...
Ilaah wuxuu abuuray nin, nin iyo naag, ekaanta Ilaah. Oo Ilaah nin buu barakeeyey, wuxuuna faray inuu tarmo oo dhulka ka buuxsamo. Jacayl, Sayidku wuxuu siiyey nin awood u leh inuu u dhiibo dhulka sidii wakiil ama inuu u taliyo xayawaankeeda. Sheekada abuurka, ninku waa taajkii abuurista; qofka koowaad waa Aadan. Waxaa calaamadeeyay Adam, oo dembaabay, aadanaha wuxuu ku nool yahay caasinimo ka dhanka ah abuurtiisa wuxuuna leeyahay ...
Qorniinku waa Erayga Eebbe ee la waxyooday, marag murka aaminka ah ee Injiilka, iyo u gudbinta runta ah ee saxda ah ee muujinta Ilaah ee dadka. Marka tan la eego, Qorniinka Quduuska ah waa mid aan macquul ahayn oo aasaasi u ah Kaniisadda dhammaan su'aalaha wax dhigista iyo nolosha. Sideen ku garan karnaa Ciise inuu yahay iyo wuxuu Ciise baray? Sideen ku ogaan karnaa in injiilku run yahay ama been yahay? Maxaa aasaas u ah waxbarista iyo nolosha? Baybalku waa ...
Kaniisadda, oo ah Jidhka Masiixa, waa bulshada dhammaan kuwa rumeysan Ciise Masiix ee Ruuxa Quduuska ahi ku dhex nool yahay. Hawsha Kaniisadda ayaa ah wacdinta injiilka, in la baro wax walba oo Masiixu ku faray, baabtiiskii, iyo daaqsintii adhiga. Marka la guto waajibaadka, Kaniisadda, oo uu ku hoggaamiyo Ruuxa Quduuska ah, waxay qaadataa Kitaabka Quduuska ah hagitaan waxaana si joogto ah u hago Ciise Masiix, oo madaxdeeda nool. Baybalku wuxuu leeyahay: Kuma yaa Masiix ...
Masiixiyiintu waa qof walba oo aaminaada Masiixa. Cusboonaysiinta Ruuxa Quduuska ah, Masiixiyiintu dib ayey u dhasheen oo, nimcada Ilaah iyadoo la raacayo korsashada, waxaa la geliyaa xiriir saxda ah oo lala yeesho Ilaah iyo dadka kale ee aadanaha ah. Nolosha Masiixiyiinta waxaa lagu gartaa midhaha Ruuxa Quduuska ah. (Rooma 10,9-13; Galatiya 2,20; Yooxanaa 3,5-7-8,34; Mark 1,12; Yooxanaa 13-3,16; 17-5,1; Rooma 8,9; 13,35; Yooxanaa 5,22, 23; Galatiya) Waa maxay macnaheedu inuu ilmo noqdo ...
Malaa'igtu waa jinniyo abuuray. Waxay ku qalabaysan yihiin rabitaan xor ah. Malaa'igta qoduuska ah waxay Ilaah ugu adeegaan sidii malaa'ig iyo wakiilo, waxayna u adeegaan jinniyo kuwa hela badbaadada, oo waxay la wehelin doonaan Masiixu markuu soo noqdo. Malaa'igta caasiyiinta ah waxaa loo yaqaanaa jinniyo, jinniyo shar leh iyo jinniyo wasakh leh. Malaa'igahu waa jinniyo, malaa'igo iyo addoommo Eebbe. (Cibraaniyada 1,14; Muujintii 1,1; 22,6; Matayos 25,31; 2 Butros 2,4; Mark 1,23; Matayos 10,1) ...
Shaydaanku waa malaa'ig dhacday, oo ah hogaamiyaha ciidamada sharka ee dunida xagga ruuxa. Qorniinku wuxuu kaga hadlay siyaabo kala duwan: Ibliis, cadow, kan sharka leh, gacankudhiiglaafe, beenaale, tuug, qaanso, kan dacwooday walaaliheen, masduulaagii, ilaaha adduun. Isagu wuxuu ku jiraa caasinimo joogto ah oo Eebbe ka gees ah. Sababta oo ah saameyntiisa, wuxuu ku beeraa kala qaybsanaan, khiyaano iyo caasinimo dadka dhexdeeda. Horay baa looga adkaaday Masiixa, iyo xukunkiisa iyo saamayntiisa sida Ilaah ...
Injiilku waa warka wanaagsan ee ku saabsan furashada xagga nimcada Ilaah ee ku saleysan rumaysadka xagga Ciise Masiix. Farriinta ayaa ah in Masiixu u dhintay dembiyadeenna aawadood, in la aasay, oo la sara kiciyey maalintii saddexaad ka dib Qorniinku, ka dibna wuxuu u muuqday xertiisii. Injiilku waa warka wanaagsan ee aan ku gali karno boqortooyada Ilaah iyadoo loo marayo shaqada badbaadada ee Ciise Masiix. (1 Korintos 15,1: 5-5,31; Falimaha Rasuullada 24,46:48; Luukos; Yooxanaa ...
Aasaaska dhaqanka Masiixiyiintu waa aaminaad iyo jacayl daacad u ah Badbaadiyeheenna, kan ina jeclaaday oo nafteenna isu bixiyey. Aaminta Ciise Masiix waxaa lagu muujiyey rumaynta injiilka iyo shaqooyinka jacaylka. Ruuxa Quduuska ah, Masiixu wuxuu u rogaa qalbiyada rumaystayaasha wuxuuna u oggolaanayaa inay midho dhalaan: jacayl, farxad, nabad, aaminin, samir, naxariis, roonaan, is-xakameyn, caddaalad iyo run. (1aad John ...
Nimcooyinka Eebbe waa nimcada ay mudan tahay in Eebbe diyaar u yahay inuu wax walba oo abuurtiisa abuuray. Dareenka guud, nimcada Ilaah ayaa lagu muujiyey ficil kasta oo is-muujinta rabbaaniga ah. Thanks to nimco, nin iyo dhammaan cosmos oo dhan ayaa laga badbaadiyay dembiga iyo dhimashada Ciise Masiix, waxaana mahad leh nimcada ninku wuxuu helayaa awood uu ku ogaado oo ku jeclaado Ilaah iyo Ciise Masiix iyo inuu galo farxadda badbaadada weligeed ah Boqortooyada ilaaha. (Kolosay 1,20; ...
Dembigu waa sharci-darro, oo waddan ka soo horjeedaa Ilaahay. Tan iyo wakhtigii dembigu dunidan yimid Aadan iyo Xaawo, ninku wuxuu ku hoos jiray harqoodkii dembiga - harqood la saari karo oo keliya nimcada Ilaah ee loo maro Ciise Masiix. Xaaladda dembiga ee bini-aadamka waxay muujisaa isu soo jiidashada inay naftaada iyo qofka danaha gaarka ah ka sarraysid Ilaah iyo doonistiisa. Dembigu wuxuu horseed u yahay ka fogaanta Ilaah iyo silica iyo dhimashada. Sababtoo ah qof walba ...
Rumaysadka Ilaahay waa hadiyad ka timid xagga Ilaah, oo ku xidhnaa wiilkiisii ​​uurjiifka ahaa oo lagu iftiimiyey eraygiisa weligiis ah iyada oo loo marayo marag ka ahaanta Ruuxa Quduuska ah oo ku jirta Qorniinka. Rumaynta Ilaah ayaa ka dhigaysa qalbiga iyo maskaxda dadka inay aqbalaan hadiyadda Ilaahay ee nimcada, badbaadada. Iimaanka xagga Ciise Masiix iyo Ruuxa Quduuska ah, rumaysadku wuxuu awood inoo siinayaa inaynu noqonno mid bulsho ahaaneed oo aamin u ah Ilaaha Aabbeheen ah. Ciise Masiix waa aasaasaha iyo fuliyaha ...
Badbaadadu waa dib u soo celinta xiriirkii aadanaha ee Ilaah iyo furashada abuurkasta oo ka timaada addoonsiga dembiga iyo dhimashada. Ilaahay badbaadintu kaliya kuma siinayso nolosha hadda jirta, laakiinse waara weligeedba qof kasta oo aqbala Ciise Masiix inuu yahay Sayid iyo Bixiyaha. Badbaadadu waa hadiyad ka timid xagga Ilaah, oo ay suurto gal tahay nimco, oo lagu bixiyo iimaanka xagga Ciise Masiix, oo aan lagu kasban wanaag ama wanaag ...
Baybalku wuxuu xaqiijinayaa in kuwa ku sii jira iimaanka xagga Ciise Masiix waa la badbaadin doonaa oo weligood waxba kama qaadi doonaan gacanta Masiixa. Baybalku wuxuu adkeynayaa aaminnimadiisa xad dhaafka ah ee Rabbiga iyo ku filnaanshaha buuxda ee Ciise Masiix badbaadadeenna. Waxa kale oo ay ina tusaysaa jacaylka weligiis ah ee Eebbe u leeyahay dadyowga oo dhan, waxayna Injiilka ku sheegaysaa inuu yahay xoogga Eebbe badbaadinta kuwa rumaysta oo dhan. Haysashada hubaal ahaanta badbaadada, rumaystaha ayaa ...
Caddaaladdu waa fal nimco ah oo ka timid xagga Ilaah xagga iyo xagga Ciise Masiix, kaas oo uu rumaystuhu ku xaq u leeyahay Ilaah hortiisa. Markaa, markay rumeeyaan Ciise Masiix, ninku wuxuu helaa cafiskii Eebbe wuxuuna ku helayaa nabad xagga Rabbiga iyo Badbaadiyaha. Masiixu waa farcankii, axdigii horena wuu gaboobay. Axdiga cusub, xiriirkayaga aan la leenahay Ilaah wuxuu ku saleysan yahay aasaas kale, wuxuu ku saleysan yahay heshiis ka duwan. (Rooma 3, 21-31; 4,1-8; ...
Sabtida Christian waa nolosha ku dhex jirta Ciise Masiix oo rumayste kasta uu ku helo nasasho run ah. Sabtiga toddobaad ee toddobaadlaha ah ee reer binu Israa'iil lagu amro ee Tobanka Amar waxay ahaayeen hooska tilmaamaya Rabbigeenna iyo Badbaadiyeheenna Ciise Masiix oo ah astaan ​​run ah. (Cibraaniyada 4,3.8-10; Matayos 11,28-30; Baxniintii 2-20,8; Kolosay 11-2,16) U dabaaldega badbaadada Masiixa Cibaadada ayaa jawaab u ah ficillada nimcooyinka Eebbe inagu sameeyey. leedahay. ...
Toobad keena (oo sidoo kale loo tarjumay "qalin") xagga ilaahay nimcada leh waa qalbi is badal, oo ay keento Ruuxa Quduuska ah oo ku xidhnaa Ereyga Eebbe. Toobaddu waxay ku lug leedahay ka warqabka dembigiisa qof waxayna la socotaa nolol cusub, oo quduus looga dhigay rumaysadka xagga Ciise Masiix. (Falimaha Rasuullada 2,38; Rooma 2,4; 10,17; Rooma 12,2) Barashada fahamka toobadda cabsi weyn "ayaa ahayd tilmaanta nin dhalinyaro ah cabsidiisa weyn ee ah inuu Ilaah ku qabo ...
Qudduusku waa ficil nimcadiisa oo Ilaah ku rumaysto rumeeyaha iyo qummanaanta ciise masiix ee rumaystaha oo ku dhex gala. Quduusnimada waxaa lagu soo qaatay rumaysadka Ciise Masiix waxaana lagu sameeyaa joogitaanka Ruuxa Quduuska ah ee dadka. (Rooma 6,11:1; 1,8 Yooxanaa 9: 6,22-2; Rooma 2,13:5; 22 Tesaloniika 23; Galatiya) Quduusnimada Sida ku xusan qaamuuska 'Concise Oxford', qoduuska macnihiisu waa "in la kala tago ama in wax la qaddariyo", ama "dembiga ...
Cibaadadu waa jawaabta rabbaaniga ah ee ammaanta Ilaah. Waxa lagu kiciyaa jacaylka rabaani ah waxayna ka soo baxdaa is-muujinta rabbaani ah ee abuuristiisa. Cibaadada, rumaystahu wuxuu galayaa wada xiriirka lala yeesho Ilaaha Aabbaha ah xagga Ciise Masiix, oo lagu dhex dhexaadiyo Ruuxa Quduuska ah. Cibaadadu waxay sidoo kale ka dhigan tahay inaad siiso is-hoosaysiin iyo farxad farxad leh Ilaah wax kasta. Waxay isu muujisaa dabeecadaha iyo ficillada ...
Baabtiishanka biyaha waa calaamad u ah rumaystaha toobadkeenka, waa calaamad muujinaysa inuu aqbalayo Ciise Masiix inuu yahay Rabbi iyo Bixiyaha, waana ka qaybqaadashada dhimashada iyo sarakicidda Ciise Masiix. Ku baabtiista "Ruuxa Quduuska ah iyo dab" waxaa loola jeedaa shaqada cusboonaysiinta iyo nadiifinta ee Ruuxa Quduuska ah. Kaniisadda Adduunweynaha ee Ilaah waxay ku dhaqmaan baabtiis baabtiis dhexdiisa. (Matayos 28,19:2,38; Falimaha Rasuullada 6,4:5; Rooma 3,16: 1-12,13; Luukos 1:1,3; 9 Korintos; Butros-; Matayos ...
Cashada Rabbiga ayaa ah xusuusta wixii Ciise hore u qabtay, oo calaamad u ah xidhiidhka aynu hadda la leennahay, iyo ballanka waxa uu samayn doono mustaqbalka. Markasta oo aan u dabaaldegno karaamada, waxaan ku qaadnaa kibis iyo khamri anoo xasuusna badbaadiyaheena oo aan ku dhawaaqi doono dhimashadiisa ilaa uu yimaado. Karaamadu waa ka qaybqaadashada dhimashada iyo sarakicidda Rabbigeenna, oo isagu jidhkiisa siiya oo dhiiggiisa daadiya, si annagana loo cafiyo ...
Wakiilka maaliyadeed ee masiixiga waxaa loola jeedaa ula macaamilka ilaha shaqsiyeed qaab ka tarjumeysa jacaylka Ilaah iyo deeqsinimada. Tan waxaa ku jira waajibka ah inay ku tabarucaan qayb ka mid ah lacagaha shaqsiyadeed shaqooyinka Kaniisadda. Hawsha Ilaahay ee kaniisadda uu Ilaahay siiyay waa inay ku tabarucdo wacdinta injiilka iyo daaqista adhiga. Bixinta iyo ku-deeqidda waxay muujineysaa cibaadada, iimaanka, addeecidda iyo ...
Madaxa kiniisadda waa Ciise Masiix. Wuxuu kaniisadda ku muujiyaa doonista Aabbaha kaniisadda Ruuxa Quduuska ah. Iyadoo loo marayo Qorniinka, Ruuxa Quduuska ahi wuxuu baraa oo u sahlaa Kaniisada inay u adeegto baahiyaha jameecooyinka. Kaniisadda Adduunyada ee Ilaah waxay ku dadaaleysaa inay raacdo tilmaamaha Ruuxa Quduuska ah ee ilaaliya jameecooda iyo sidoo kale magacaabidda odayaasha, wadaaddada, iyo hoggaamiyeyaasha. (Kolosay 1,18:1,15; Efesos 23: 16,13-15; Yooxanaa; ...
Sheegiddu waxay daaha ka qaadday doonista Ilaah iyo qorshaha aadanaha. Waxsii sheegyada kitaabiga ah, Ilaah wuxuu caddeeyaa in dembiyada aadanaha laga cafiyo tawbadkeen iyo iimaanka shaqada badbaadada ee Ciise Masiix. Waxsii sheegiddu waxay ku dhawaaqdaa Ilaah inuu yahay abuuraha wax walba leh oo xukumaa waxkastana wuxuu bani aadamku u xaqiijiyaa jacaylkiisa, nimcadiisa iyo aaminnimadiisa wuxuuna rumaystaha ku dhiirrigeliyaa nolol cibaado leh xagga Ciise Masiix. (Ishacyaah 46,9-11; Luukos 24,44-48; ...
Sidii uu ballan qaaday, Ciise Masiix wuxuu ku soo noqon doonaa dhulka inuu xukumo oo xukumo quruumaha ku dhex jira boqortooyada Ilaah. Imaatinkiisa labaad ee awooda iyo ammaanta ayaa la arki doonaa. Dhacdadani waxay bilaabaysaa sarakicidda iyo abaalmarinta quduusiinta. (Yooxanaa 14,3; Muujintii 1,7; Matayos 24,30; 1 Tesaloniika 4,15:17 - 22,12; Muujintii) Masiixu miyuu soo noqon doonaa? Maxaad u malaynaysaa inay tahay dhacdada ugu weyn ee ka dhici karta masraxa adduunka? ...
Dhaxalka kuwa rumaystayaasha ahi waa furasho iyo nolol weligeed ah oo Masiixa ku jirta oo ah carruurtii Ilaah ee wadaaga Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aabuhu mar horeba wuxuu rumaystayaasha ku sii wareegayaa boqortooyada wiilkiisa; Dhaxalkooda waxaa lagu hayn doonaa jannada waxaana lagu wareejin doonaa si buuxda imaatinka labaad ee Masiixa. Qoduusiintii sarakicday waxay Masiixa kula boqraan boqortooyada Ilaah. (1 Yooxanaa 3,1: 2-2,25; 8:16; Rooma 21: 1,13-7,27; Kolosay 1:1,3; Daanyeel 5; Butros; ...
Dhamaadka da'da, Ilaah wuxuu ku soo ururin doonaa kuwa nool iyo kuwa dhintayba carshiga Masiixa ee Masiixa hortiisa. Kuwa xaqa ahu waxay heli doonaan ammaanta weligeed ah, iyo kuwa aan cibaada lahayn oo gudubta ololka. Masiixa Sayidku wuxuu dadka oo dhan ugu sameeyaa si deeqsinimo iyo xaq ah, oo ay ku jiraan kuwa sida muuqata aan rumaynin injiilka markay dhintaan. (Matayos 25,31: 32-24,15; Falimaha Rasuullada 5,28:29; Yooxanaa 20,11: 15-1; Muujintii 2,3: 6-2; 3,9 Timoteyos; Butros; ...
Jahannamada waa go'itaanka iyo ka fogaanta xagga Ilaah ee kuwa dembiilayaasha aan cilaaqaadka lahayn doortay. Axdiga Cusub dhexdiisa, cadaabta waxaa lagu sawiraa "barkad holac ah", "mugdi" iyo Gehenna (ka dib Tal Hinnom oo u dhow Yeruusaalem, oo ah meel gubashada qashinka). Jahannamada waxaa lagu qeexay ciqaab, silica, silica, halaagga weligeed ah, ilmada iyo ilko ilko. Qormada iyo Hades, laba erey oo badanaa lagu tarjunto "cadaab" iyo "qabri" oo ka yimid kitaabiga ah ...
“Jannada” erey Kitaabka Qudduuska ah wuxuu qeexayaa meeshuu doortay ee Ilaah, iyo sidoo kale masiibada weligeed ah ee dhammaan carruurta Ilaah soo furtay. "In lagu jiro jannada" waxaa loola jeedaa: in lala joogo Ilaah xagga Masiixa halkaasoo aan dhimasho dambe, murug, oohin iyo xanuun lahayn. Jannada waxaa lagu sharaxay "farxad weligeed ah", "farxad", "nabad" iyo "xaqnimada Ilaah". (1 Boqoradii 8,27: 30-5; Sharciga Kunoqoshadiisa 26,15:6,9; Matayos 7,55; Falimaha 56-14,2; Yooxanaa 3-21,3; Muujintii 4-22,1; 5-2;) . ...
Gobolka dhexe waa gobolka kuwa dhintay ay ku jiraan ilaa sarakicidda jidhka. Iyada oo ku xidhan fasiraadda kutubta laxiriirta, Masiixiyiintu waxay aragtiyo kaladuwan ka qabaan nooca gobolkaan dhexdhexaadka ah. Qodobbada qaar ayaa sheegaya in dadka dhintay ay la kulmaan xaaladdan iyagoo og, kuwa kalena in miyirkoodii uu baxay. Kaniisadda Adduunka ee Ilaah waxay rumeysan tahay in labada aragtiyood la ixtiraamo. (Ishacyaah 14,9: 10; Yexesqeel ...
Millennium waa waqtiga lagu sharaxay kitaabka Muujintii muddadii uu shahiiday Masiixiyiintu la xukumi doonaan Ciise Masiix. Millenni kun kadib, markuu Masiixu burburiyey cadaawayaashii oo dhan, oo uu wax walba u xilsaaro, wuxuu boqortooyada u gacan gelin doonaa Ilaaha Aabbaha ah, oo jannada iyo dhulkaba dib baa loo soo celin doonaa. Qaar ka mid ah caadooyinka masiixiga ayaa macno ahaan u tarjuma kunka kun oo sano ama ka hor imaatinka Masiixa;
Caqiido taariikhi ah
Caqiidada (caqiidada), ee Latinka "Waan rumeysanahay") waa aasaaska soo koobitaanka aaminsanaanta. Waxay dooneysaa inay liis garato runta muhiimka ah, cadeyso hadalada barida, runta ka sooc qaladka. Waxaa badanaa loo keydiyaa si si fudud loogu xasuusto. Dhowr meelood oo Kitaabka Quduuska ahi waxay leeyihiin dabeecad caqiido. Marka Ciise wuxuu u adeegsaday qorshaha ku saleysan Sharciga Kunoqoshadiisa 5: 6,4-9. Bawlos wuxuu ...